Emergency Ozi maka Holm | Holmbygden.se
Emergency Ozi maka Holm nri pụrụ mgbe nile hụrụ mfe via holmbygden.se/akut ma ọ bụ site na vitgröna mbụ enyemaka akara n'elu nri nke n'ihu.
Ọ bụrụ na nke mberede akpọ mberede ekwentị. 112. Na Sjukvårdsrådgivning Tel. 1177.
The ahụ ike center na Lidén: Tel. 0692-439 20, The ahịa ọgwụ Lidén: Tel. 0771-405 405.
Holm si defibrillator / Olle Frisk Tel. 0730-484 511 ma ọ bụ
ịgwa mmadụ ka ozi kpọtara ya na Olle si owuwu ụzọ mbata (Anundgård 134).
Rescue Resources Holm bi dị
dị ka 30 st “mesikwuru ibe” dịsasịrị Holm. A oru ngo ebe mberede njikere afọ ofufo Holmbor na ihe mberede via SMS na pụrụ ịbụ na saịtị n'ime a nkeji ole na ole ma ọ bụ, na kasị mma, nke abụọ, dabere na anya. GỤKWUO n'ihu ala.
Defibrillators na Anundgård na Olle Frisk farstu ihe niile. webata obodo ihe.
Ụgbọ ihe mberede guzo ke Lidén na banyere 20 m (17 km) ka Holm si Church mgbe mkpu (turnout * 90 s) mgbe ọ bụ dị na mpaghara. Lidén ụgbọ ihe mberede Otú mmanya ọrụ na ebe ọzọ na ogologo-agbaba na eg. Umeå. N'ọnọdụ dị otú ahụ mere ụgbọ ihe mberede si Sundsvall.
A deltidsbrandkår na Lidén na banyere 23 m (17 km) ka Holm si Church mgbe mkpu (turnout * 5 m). Ha na-mere na socalled. “IVPA mkpu”, nọ na-echere ụgbọ ihe mberede – ike na-eche na ụgbọ ihe mberede na-abata. T.ex. gbasara obi njide.
Ụgbọ ihe mberede Station na Sundsvall, na banyere 50 km (30 m) Myọcha ka Church (90 na sec. *).
Full-oge Fire brigades na Sundsvall na Timrå site banyere 35 m (50 km) ka Holm chọọchị si mkpu (90 na sec. *).
* Turnout bụ oge site na ọ na-ezipụ nke ihe mberede ka mberede si ebe.
The oru ngo “enwekwukwa agbata obi” na Holm bụ na-arụ ọrụ kemgbe jaunari 2014
Na ihe mberede, nwere ike ugbu a Holmbor na ụbịa nwetara agụmakwụkwọ bụ isi na-esi na-enyere a agbata obi mkpa. Ugbu mere ndị nọ na oru ngo site SMS SOS mkpu mgbe ihe mberede na ihe 15 km okirikiri nke Holm chọọchị. The oru ngo nwere ike mgbe e mesịrị na-mepụtara n'ihu nke mere na ọ bụ nanị ndị na na oge bụ n'ime a ụfọdụ okirikiri nke mberede ga-mara ọkwa na ihe omume m.h.a. mobile n'ọnọdu.
The nnapụta Medelpad: Skydd mot olyckor i glesbygd
Omume ụdị ndị mkpa n'ihi na ọ na-ezipụ (akụziri gị otú ime ihe bara uru njikọ):
– enyo enyo gbasara obi njide (Mụta första hjälpen och hjärtlungräddning)
– mberede okporo ụzọ (Läs hur du gör först på en trafikolycka, lyssna ma ọ bụ se film.)
– mmiri na-eri (Mụta banyere vattenlivräddning, se om någon håller på drunkna, islivräddning na issäkerhet. .)
Ị chọrọ? Ịrịba ama nke mmasị!
(A nkwenye ga-eziga gị e-mail.)
Ọtụtụ mgbe anọ na obodo
Tinye image odide n'okpuru:*
Ngo mesikwuru agbata obi na media:
15/2 2019 SVT Report & Västernorrland: Planer på att utöka samarbetet med frivilliga i glesbygd:
SVT intervjuade Olle Frisk och Niklas Wikholm i Holm som ställer upp frivilligt och hjälper andra bybor vid olyckor. Nu finns planer på att samarbetet skall utökas utanför Medelpad. Gụkwuo ebe a.
Reportage från Holm i SVT Rapport och Västernorrland den 15 February 2019.
13/10 2016 SVT Västernorrl.: Volunteers nnapụta arụmọrụ e mapped:
Volunteers nwere ike ịbụ ihe dị mkpa zuo ezu ka nnapụta na ụgbọ ihe mberede na idaha ihe mberede. The nchọpụta ọhụrụ si Linköping University. Läs SVT’s artikel.
2016, Research na mesikwuru agbata obi:
The oru ngo, Holm bụ na nnabata e wezụga media na mberede ọrụ gburugburu mba, site na-eme nnyocha na Mahadum nke Linköping. Ebe abụọ research akwụkwọ nke mata ngo Ike onye agbata obi na ndị ọrụ afọ ofufo na ikpe nke ihe mberede:
2016 25/4: Ụfọdụ liability mbipụta banyere egwuregwu, karịsịa afọ ofufo, na-ekere òkè na mberede.
Via njikọ ị pụrụ ịgụ a nchịkọta nke akụkọ na T.H.. na otu peeji nke ị ga-ahụkwa na akụkọ na zuru ederede.
8/7 2015, SR P4 n'ehihie: Fler bybor utbildas i att hjälpa till vid olyckor
Thomas Åslin gbara ajụjụ ọnụ site Swedish Radio banyere oru ngo Ike onye agbata obi ugbu a dị na ọtụtụ ebe na Medelpad, tinyere Holm. Obodo-asị melite nchedo ime obodo ebe, ma na-achọ mma ohere debrief mgbe ihe mberede.
– Nsogbu na player n'elu? Prova mp3.
– Mụta banyere akụkọ nke Holmbygden.se.
– Mụta banyere akụkọ nke Sveriges Radios här.
14/4 2014, SR P1 Vetenskapsradion Forum: Mgbe ụmụ amaala na-akpọ si
Radio Akụkọ site n'etiti ndị ọzọ. Holm na otú ndị ọrụ afọ ofufo na-akpọ si ịzọpụta ndụ.
– Gụọ ihe banyere akụkọ na Holmbygden.se.
– Page maka ljudfil här.
Lee TV akụkọ banyere Holms mesikwuru ibe.
isi iyi: TV4 Sundsvall; Frivilliga krafter livräddar i byarna 14/5 2014.
Ka 2014, SOS mkpu: ọrụ: Zọpụta a agbata obi, sid. 14-16 (isi iyi: sosalarm.se)
Gụọ SOS nwere ụlọ ọrụ magazine banyere oru mbụ mkpu. Gụọ afọ ofufo mgbalị na ihe na-eme mgbe ndị ọrụ afọ ofufo Holm natara SMS ozi si mberede nke ihe mberede na district.
Volunteers na Holm, Naggen, Norrhassel, Ljustorp na Magpie zụrụ azụ na-ejizi mberede nọ na-echere nnapụta ọrụ na ụgbọ ihe mberede.
Previous isiokwu na isiokwu na anyị website na ndị ọzọ media
2015 13/7 Holmbygden.se: “enwekwukwa agbata obi” – ọma n'ime ime obodo
2014 13/4 Swedish Radio: Vetenskapsradion na Holm on "Iwusi ibe"
2012 17/12 Sundsvall Tidning: Naa nchebe ime obodo ebe
2012 16/12 Holmbygden.se: Holm ọhụrụ "obodo lifeguard"
2012 9/12 Holmbygden.se: Chọrọ ịbụ a lifeguard na Holm?
2012 22/5 Holmbygden.se: Holm si defibrillator - ugbu a na ọrụ!
2012 10/5 Holmbygden.se: Ngosipụta nke Holm ọhụrụ defibrillator 15/5!
Ozi maka nnukwu Holm Ime Obodo
A defibrillator dị na mpaghara na a pụrụ inweta na a gbasara obi njide – ọbụna tupu ụgbọ ihe mberede rutere na ntụpọ. Gụọ n'okpuru esi mee ka nke gbasara obi njide, i Holm.
IN gbasara obi njide – m Holm:
Were a jide ya n'ubu, ịma jijiji jiri nwayọọ na-agbalị ime ka ndị mmadụ. Ọ bụrụ na onye na-adịghị na-eteta, ị na-elele maka iku ume.
2. Check ume*
Mepee airway site atụkwasị otu aka na n'egedege ihu, ehulata gị isi azụ na ebuli agba na gị abụọ n'aka PEK -a n'etiti mkpịsị aka. Tinye ntị gị nso onye ahụ imi na ọnụ, ege ntị ma na-eche ume, -ahụ mgbe na gị obi ma ọ bụrụ na ọ adahade.
3. adọ aka ná ntị 112
Ọ bụrụ na onye nwere ọrịa ntutu ịdapụsị ume, eku ume mgbe nile ma ọ bụ ị na-amaghị, ị ga-amata ihe onye ahụ ahụhụ gbasara obi njide.
Ring 112 (ịjụ ihe ọ bụla ọzọ) na
Malite ozugbo atụtụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nso n'obi-Starter:
Jụọ onye ọ bụla ọsọ ọsọ weghachite defibrillator na Olle Frisk farstu (Anundgård 134).
4. ime obi- iji tụtee mmadụ – HLR, “30:2”
obi compressions – 30 ugboro:
Ebe gị otu nkwojiaka n'etiti obi, edebe gị ọzọ aka n'elu. Press ala ala 5 cm na ntọhapụ kpamkpam n'etiti compressions. Jide a ngwa ngwa ọnụego nke banyere. 2 mgbali / abụọ (100-120 mgbali / min). push 30 ugboro.
Mepee airway: na-ejide a aka n'egedege ihu, ehulata gị isi azụ na ebuli agba na gị ọzọ aka PEK- na mkpịsị aka. Tuo nke onye ahụ imi, na-edebe gị ọnụ nso aja na ịfụ ikuku ruo mgbe obi adahade.
mee 2 ventilations.…
Gaa n'ihu na 30 compressions na 2 ventilations ruo mgbe ụgbọ ihe mberede ga-.
OBS! Nwere ike ma ọ bụ chọrọ ime nnapụta ume, ọ dị mma ka dị nnọọ ime obi compressions karịa ihe ọ bụla.
Dabere na otú ọtụtụ ha nọ ebe ahụ, igbunye ihe aga-eme.
otu ma ọ bụ abụọ amalite atụtụ (otu onye nwere ike mpikota onu ma na-eme nnapụta ume mgbe ịgbanwe ya mgbe ị na-esi ike gwụrụ, odika nkeji abụọ ọ bụla).
na akpọ SOS Tel. 112,
na akpọ Olle 0730-484 511 ma ọ bụ download defibrillator.
Bụ ya onwe gị, ọ dị mkpa na-akpọ maka enyemaka na-eme atụtụ. Enweghị na-aga n'ihu atụtụ aka ịnwụ nwere. Gaa n'ihu dị ka ogologo dị ka ị na-amasị.
5. Jiri obi-Starter
Pịa ON button na-eso unit si okwu ntụziaka.
The ngwaọrụ-ekpebi onwe ya ma na-agba ọsọ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na, kama, ị ga-anọgide na-eme atụtụ.
isi iyi (plus obodo ose): HLR-rådet (hlr.nu).
* Taa ka ha hapụrụ usu akara n'ihi na usu bụ mgbe nnọọ ike ịmara. Ọzọkwa, ị ida dị oké ọnụ ahịa oge. O nwekwara ikpebi na ọ bụ fọrọ nke nta-adịghị njọ ka obi ma ọ bụrụ na ị na-eme eme atụtụ aka na ihe ugbua arụ ọrụ obi.
Otu ọ dịghị mkpa na-atụ egwu nke na-eme emehie kwa na obi Starter ma ọ bụ na atụtụ (HLR). Chọpụta, ị pụrụ ime ka ntuziaka omume dị iche iche na mma, ma naanị kpatara gị nwere ike omume na-eme bụ ime ihe ọ bụla. Heart amalite ka ọbụna ikwu ihe na-eme. Early atụtụ na defibrillator mụbaa ohere nke lanarị, Holm karịsịa na anya na njem ugboro n'ihi na ụgbọ ihe mberede.
Kwagidere mgbu? – Gbochie -ekwe Omume gbasara obi njide
Ọ bụrụ na ị na-mgbu nwere ike ịbụ n'ihi na a dịgasị iche iche nke ihe, mgbe ọ bụ na-adịghị emerụ. Ọ bụrụ na Otú ọ dị, a ike, emegbu ma ọ bụ crampy mgbu na obi nke na-adịghị pụọ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na i nwere obi mgbu mgbe mmetụta nke ume, ọgbụgbọ, clammy ma ọ bụ oge ufodu obi otiti. Mgbe ahụ, ha ga-akpọ 112. Bụ nwoke naanị kwesịrị na-akpọ onye dị ya nso, nke mere na ọ bụghị nanị ha n'ihu ụgbọ ihe mberede abịarute. Mkpa ma ọ bụrụ na ị ga-esi a gbasara obi njide. gỤKWUO – sjv.upplysningen 1177.se.
Nọ na-echere ụgbọ ihe mberede nwere ike na-a Treo ma ọ bụ Ịṅụ Ọgwụ Aspirin.
Ịṅụ Ọgwụ Aspirin na nkà mmụta ọgwụ (ọgwụ) egbochi platelet (trombocyterna) ikpaohia ọnụ na ụdị-egbochi mkpụkọ. Ịṅụ Ọgwụ Aspirin nwere ike na-eche ụgbọ ihe mberede ma ọ bụ helikọpta ịzọpụta ndụ nke a nkụchi obi ndidi. Always gwa ndị enyemaka n'ọrụ ihe ọgwụ ọjọọ eme ihe ị na-na-ewere.
isi iyi: Karl Johan Tötterman, ọkachamara na gbasara obi- ọrịa.
Ị nwere Nitro-na nkà mmụta ọgwụ (ịgba / mbadamba) ị nwere ike were ya mgbe ị na-eche, zuru ike. nitroglycerin (ọgwụ) dilates arịa, ikwe ka ọbara na-abata. Nitro na-eji enyemaka n'ọrụ site spraying ya n'okpuru ire.
isi iyi: Apoteket.se.
Ekwela ụgbọala onwe gị ụlọ ọgwụ. Nke a nwere ike n'aka-eme ka ihe mberede ma ọ bụrụ na ị gafee mgbe ụgbọala. Jụọ onye ọzọ ụgbọala ma ọ bụ na-akpọ ụgbọ ihe mberede.
Gịnị bụ rịaworo na myocardial infarction?
Rịaworo na myocardial infarction bụ n'ihi na ibelata nke obi akwara. Na infarction, ọ bụ kpam kpam kwụsịrị na otu nke arịa. Blood nwere ike na-esiri ike na-na na na-enweghị oxygen na-akpata ihe mgbu na obi na-ike na-arụ ọrụ.
← Pịa na image ka enlarge.
Lee ndị kasị njupụta nke ihe mgbu n'oge a nkụchi obi. Ihe mgbu nke myocardial infarction, Otú ọ dị, o yiri nnọọ iche na asị ibe site ikpe ikpe.
Ihe mgbu kere site enweghị oxygen na obi muscle ebe ọbara na-agakwaghị p.g.a. constriction. Man “ghọgburu” mgbe ahụ ka na-eche na ihe mgbu na-abịa si n'ebe ndị ọzọ dị ka. na olu akwa, n'ihi na ihe mgbu sensọ si na-ekere òkè n'otu ọnụ na ụjọ usoro, obi.
Ebe i nwere ike chọọ bụ Holm (na) defibrillator dị site dee “anundgård” na search ubi Hjärtstartarregistrets website.
A ngo bụ na Stockholm maka utlarming nke ndị mmadụ na gburugburu gbasara obi njide. A precursor na oru ngo na-now na Medelpad na ozokwa mepụtara na-ekpuchi ndị ọzọ na ụdị nke ihe mberede. Gụkwuo ebe a.
Nke a bụ ihe Holm defibrillator si – nyere n'onyinye ma obodo na “utomsocknes”, Na ụzọ nke Olle Frisk. Defibrillator dị mfe iji, dị nnọọ gbanye, mgbe na-ekwu okwu a dere votu na dị nnọọ ihe na-eme.
GỤKWUO na akụkọ si ngosipụta nke parish ụlọ May 2012.
Mụta otú defibrillator ọrụ (echekwara na Olle Frisks owuwu ụzọ mbata)
Heart Starter na Holm ekwu Swedish ntụziaka na-agwa kpọmkwem otú ime.
Ekiri na ịmụta otú iji ihe nlereanya nke defibrillators dị na Holm.
Mgbaàmà nke ọrịa strok (APOPLEXY) – UTA EYIGHỊ NWALERE
MKpọnwụ, na-akpọ ọrịa strok, bụ mgbe i nwere ma a ọbara ọgbụgba ma ọ bụ a clot (infarkt) ụbụrụ. Mgbaàmà bụ otu n'agbanyeghị na ihe mere na uche nke ụbụrụ adịghị arụ ọrụ na-ejikarị mgbe oxygen erughi pụtara na ọbara adịghị igbasa ọma. The ọnọdụ na-eyi ndụ egwu na ọ dị mkpa ka mara ndị a mgbaàmà. Karịsịa ma ọ bụrụ na i bi ná Holm, anya site n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụla nke abụọ dị mkpa iji melite Ohere nke na-azọpụta na ebe nke ụbụrụ na-emetụta na ụgbọ ihe mberede ga-alerted ozugbo ọ bụrụ na ị na-enyo a ọrịa strok. Mụta stat ule na mgbaàmà n'okpuru.
Ansiktet kokwasịrị. Mkpọnwụ na ihu?
Kroppsdel. Otu ogwe aka na-apụtakwa na ikuku maka iri sekọnd.
Thettal. The asụsụ a na slurred na okwu na-ezighị ezi.
Tsurfactant bụ oké ọnụ. mgbe na-ala azụ, mgbanaka 112 ozugbo!
Mụta ihe banyere ọrịa strok här på 1177.